अस्पतालमा छ’टप’टाउँदै प्रहरीबाटै ब”ला”त्कृ”त किशोरी : म’री भनेर जंगलमा फा’ले !(भिडियो) – Dainik Samchar
अस्पतालमा छ’टप’टाउँदै प्रहरीबाटै ब”ला”त्कृ”त किशोरी : म’री भनेर जंगलमा फा’ले !(भिडियो)
March 27, 2021 171
बुटवलस्थित अस्पतालको बेड नम्बर १५९ । किशोरी उर्मिला चौधरी (नाम परिवर्तन) अ”र्ध”चे”त अवस्थामा पल्टिरहेकी छन् ।अस्पतालको दोस्रो तल्लामा आमा र दिदीले उर्मिलालाई ढा”डस दिएर बेडबाट बिस्तारै उठाउँदै पछाडिपट्टि सिरानीमा अ”डेस लगाएर घ’री’घरी बसाल्छन् ।
बोल्न खोज्छिन्, तर बो’ली रो’किन्छ । स’म्हा’लिन नसकेर घ’रि’घि’र रु’न्छिन् । घाँ’टी अ’ड्या’उन प्रयोग गरिएको सपोर्टले उनलाई अ’प्ठ्या’रो भइरहेको प्रस्ट देखिन्थ्यो । वरिपरि बेडका बिरामी र उनीहरूको कु’रु’वाको ध्या’न पनि उर्मिलातिरै छ ।
आफूलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने व्यक्ति प्रहरीको एक ज’वान भएको उनी बताउँछन् । जनताको सुर’क्षामा खटिनुपर्ने र’क्ष’क नै भ’क्ष’क भएपछि उनलाई अब जीवनमा कुनै इच्छा र अ’पे’क्षा नै छैन ।
म’री भनेर फा’लेको अवस्थामा बाँचेर अस्पतालको बेडसम्म आएकोमा खुशियाली म’नाऊँ या प’श्चा’ताप गरूँ ? भन्नेमा अ’न्यौलमा छिन्, उनी । ‘म’री भनेर फा’लेको थियो, नबाँ’चेको भए आनन्द हुने थियो,’ उनले रुँ’दै भनिन् । बि’र्सुंभन्दा पनि उनको दिमा’गमा पटक–पटक त्यो का’लो क्ष’ण घुमि’रहन्छ ।
उनको अ’स्मिता लु”ट्ने’ त्यो प्रहरी जवान अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको हि’रा’स’तमा छ । का’रवा’ही कसरी अघि बढ्यो भन्नेमा उनी जानकार छैनन् ।
यस्तो थियो घ”ट’ना (पी’डि’त किशोरीले बताएअनुसार)
मामा बितेकाले आमा मामाघरमा थिइनन्, मामा घर गएकी थिइन् । उनले आमालाई फोन गरिन्– ‘आमा म आज साथीको घर जमु’हा’नी जान्छु’ भनेर । घरबाट निस्किनेबित्तिकै प्रहरी जवान सुरेश क’ठरिया (थारू) को फोन आयो ।
साथीकोमा जान लागेको थाहा पाएपछि सुरेश उनलाई प’च्छ्याउँदै बाटोसम्मै आयो । उनलाई जं’गल’तिर जा’ऊँ भन्यो । उनले म साथीकोमा जान हिँडेकी हुँ, जाँदिन भनिछन् । किन जाने तिमीसँग भनिन्, उनले । धेरै जो’डब’ल गर्दा पनि उनले नमा’नेपछि सुरेशले उर्मिलाको हातमा रहेको मोबाइल खो’सेर गयो ।
मोबाइल खोसेर लगेपछि उनी साथीको घरमा गइनन् । रा’तभर त्यहीँनजिकै प्ल;टिङमा बसिन् । भोलिपल्ट सुरेश आएर उनलाई घर छाडिदिन्छु हिँड भनेर बाइकमा ज;ब;रज;स्ती बसाल्यो । उनलाई घर लैजानुको सट्टा जंगलतिर लग्यो । बाटोबाट २ किलोमिटर पर ए’कान्तमा लगेर उनलाई झो’लाको फि’त्ताले रुखमा बाँ’ध्यो ।
त्यसपछि के गर्‍यो उर्मिलालाई प’त्तो भएन । घाँ’टीमा कसेको डो’री फु’का’ली म’री भनेर फा’लेप’छि ऊ त्यहाँबाट भा’गेछ । शनिबार दिउँसो ११ बजेतिर उर्मिला हो’शमा आउँदा आफू जंगलमा रहेको थाहा पाइन् । मानिसले प’शु’वत व्यवहार गरेपनि प’शुबाट भने उनी सुरक्षित नै रहिछन् । घि’स्रिँ;दैघि;स्रिँ;दै उर्मिला सुरेशले बाइकमा उठाएर लगेको ठाउँमा आइपुगिन् । उनलाई त्यस्तो अवस्थामा देखेपछि गाउँलेले उ;द्धा;र गरे । घरसम्मै पुर्‍याइदिए ।
घरमा पुगेपछि उनले आफूलाई त्यस्तो हा;लतमा पुर्‍याउने प्रहरी ज;वानका बारेमा आमालाई भनिन् । त्यसपछि खो;जी गर्दा सुरेश कपिलवस्तु पुगेको रहेछ । सुरेशलाई प्रहरीले प;क्रा;उ गरी ल्यायो । अनि उर्मिलालाई परिवारले बुटवलको अ;स्पतालमा ल्याएर भर्ना गरेको छ । एउटै स्कूल पढेको तथा नजिकैको भए पनि उनीहरूको प्र;त्यक्ष चि;नजान भने सामाजिक सञ्जालबाट भएको रहेछ ।
सुरेशले आफूलाई विभिन्न प्र;लो;भन देखाउँदै पटक–पटक भे;ट्न द;बा;ब दिने गरेको उर्मिला बताउँछिन् । उर्मिलाले आफू ग;र्भ;व;ती छु भनेर भनेपछि सुरेशले मा;र्ने प्रयास गरेको आमाले बताइन् । दुुई महिनाअगाडि पनि आफूलाई घु’म्न जाऊँ भनेर बुटवलतर्फ ल्याएर ज;ब;रज;स्ती गरेको उर्मिलाले बताइन् । उनीहरू एउटै विद्यालयमा पढ्ने रहेछन् । कक्षा एउटै थिएन ।
सुरेशले उर्मिलालाई म तिमीलाई मन पराउँछु भन्ने गरेका रहेछन् । उनीहरू दुवैको घर एउटै वडा(तिलोत्तमा– ११) मा पर्छ । छोरीलाई कु;रेर बसेकी आमाको छुट्टै चि;न्ता छ । ‘मेरी छोरीलाई अब कसले बिहे गर्छ ? यस्तो हल्ला गा;उँभरि च;ल्यो । अब मेरी छोरी न;बिक्ने भई,’ उनले म;लिन अनुहार बनाउँदै भनिन् ।
उर्मिलाको परिवार मजदुरी गरेर गु;जा;रा चलाउँछ । उर्मिलाका बुवाको मृ;त्यु भइसकेको छ । उर्मिलाका आमा घर बनाउने ठाउँमा इँट्टा बोक्ने काम गर्छिन् । त्यसमा उर्मिलाले पनि आमालाई सघाउँथिन् । गत वर्ष एसईई पास भएकी उनले परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उच्च शिक्षा पढ्न पाइनन् ।
चे;कजाँ;च गर्दा उनको घाँ;टीमा चो;ट देखिएको छ । उनको उपचार खर्च पनि छैन । ‘साथमा १५ सय थियो, त्यही लिएर आएका हौं । पैसा सकियो । अब कसो गर्ने हो ? अस्पतालमा तिर्ने पैसा पनि छैन,’ आमाले भनिन् । उर्मिलाका चार दिदीभाइ छन् । उनी कान्छी हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतीत सिंह राठोरले जवान सुरेश कठरिया थारूलाई प’क्रा’उ गरिएको बताए ।
ब”ला;;त्का;;रपछि ह;;त्या प्रयास गरेको आ;;रो;;पमा उनलाई रुपन्देहीको मंगलपुरबाट प;;क्रा;;उ गरिएको राठोरले जानकारी दिए । राठोरका अनुसार ल”ला’इफ”का’इ ब;;ला;;त्का;;रपछि थारूले झो;लाको फि;;त्ताले घाँ;;टी कसेर नजिकैको खा;;ड;लमा फा;;लेर भागेका थिए । युवतीको मृ;;त्यु भएको भन्ने ठा;नेर थारु हिँडेको केही समयपछि युवतीको हो;;श खु;लेको र गाउँलेको सम्पर्कमा पुगेपछि उनलाई अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।
घाँ;;टीमा नि;;ल;डा;म र श;रीरका विभिन्न भागमा चो;ट लागेकी युवतीले आफूलाई ब;;ला;;त्का;;रपछि ह;;त्या प्रयास भएको बताएपछि ;घटना सार्वजनिक भएको थियो । प्रहरीले युवतीको ब;;यान र उनको परिवारको कि;टा;नी जाहेरीपछि आ;;रो;;पि;;त थारूलाई प;;क्रा;;उ गरी ब;;ला;;त्का;;र तथा ह;;त्या प्रयास उद्योगमा मु;द्दा द;र्ता गरी थप अ;नु;स;न्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पीडित परिवार दो;षीलाई का;र;वा;ही हुन्छ भन्नेमा समेत विश्व;स्त छैन । ‘प्रहरीले नै आफ्नो साथीलाई के का;र;वा;ही गर्लान् र हाम्रो स्थिति क;म;जोर छ । पहिले मान्छे ब;चा;
Prevभर्खरैआयो डरलाग्दो सूचना, अत्यावश्यक काम बाहेक आज देखि घर बाहिर निस्किन नपाइने !
Nextगौतमबुद्ध अ’न्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला नि’र्माण को लागि प्रधानमन्त्री केपि ओलिले करोडौं रकम दिने घोषणा ! भिडियो सहित
ओलीले गरेको निलम्बन पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दछु : रावल
ममी तिमी आफ्नो ख्याल गर है’ भन्दै सम्झाएका १७ छोराको बारेमा सुधारकेन्द्रवाट आयो मृत्युको खबर, आमा मुर्छित (भिडियो हेर्नुस्)
चर्चित भारतीय क्रिकेट खेलाडी सचिन तेन्दुलकर अस्पताल भर्ना
बलात्कृत अपांगलाई न्याय मुस्किल (696)
कोहलपुर दु’र्घट’ना अपडेट : ५ को मृ’त्यु (533)